Arday macalinkiisa dafirey ama inkirey aayatiin ma leh:By macow Abukar | Gabiley News Online
Arday macalinkiisa dafirey ama inkirey aayatiin ma leh:By macow Abukar
Wax qabadkii Abdirahman Boreh inuu maanta sheegto ninkan la yidhaahdo Abubakar omar Haddi Waa nasiib daro in shaqaalihii Abdirahman Boreh uu maanta soo horfadhiisto tv yada ama warbaahinta oo uu yidhaahdo anaa horemariyey marsada Djibouti:
Ninka la yidhaah Abubakar Haddi shaqsiyan waa shaqaale ka hoos shaqayn jirey ganacsade Abdirahman Boreh h hadiyo jeerna wuxuu garab joogi jirey isaga .
Sidaasi darteed Abubakar wuxuu gaadhay maanta inuu sheegto fikirkii Abdirahman Boreh h keeney dalkiisa Djibouti
. markaas waxaan leeyahay ina Haddow haku ceeboobin oo ha sheegan wax rag hortaa tacab‘aqoon iyo maalba gasheen.
Umada reer Djibouti wey ka dheregsantahay weyna ogtahay in fikiradan aad ku hadleyso iney yihiin kuwii Abdirahman Boreh ceebbayse kugu tahay inaad is tidhaahdo Abdirahman Boreh ma jogee fikirkiisii xad’ama boob oo sheego.
Laakiinse reer Djibouti’haday yihiin siyaasiinta’aqoonyahano’shacaba iyo dhamaan dadka afka soomaaliga ku hadlaa wey ogyihiin cidii Hal abuurkaa wanaagsan la hayd ee keentey dalka Djibouti inuu yahay ganacsadaha weyn ee Abdirahman Boreh :
markaa maah maaha soomaaliyeed baa waxay tidhaahdaa baqal fardo la daaqdey farasbay is moodaa sidaasi awgeed Abubakar omar ha sheegan waxayna maskaxi ‘muruq’maal’aqoon kaagalin.
Daaqada haka soo galkana iskadaa nin weynbaad tahee intaasi ayaan kugula talinayaa:::
By Macow Abukar